6 အဘို့ရလဒ် bakugan games
သင့်ရဲ့ Bakugan မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဆုံးမသှနှင့် masquerade ဆန့်ကျင်နောက်ဆုံးရန်ပွဲအဘို့အဆင်သင့်ရ။ မဟာဗျူဟာမြောက်အနိုင်ရကတ်များနှင့်အတူတိုက်ခိုက်မှုပေါင်းစပ်။ ကဒ်များကိုရွေးဖို့ mouse ကိုသုံးပါ, ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သို့မဟုတ်ကာကွယ်ရေး
bakugan စစ်တိုက် launcher
Bakugan တိုက်ပွဲဖွင့်တင်ဂိမ်း Play! ပျော်စရာရှိသည်!
မီးသတ် TD ၏မွေးဖွားမိကျောင်း၏အလုံးအရင်းကိုဖကျြဆီးနိုင်ရန်အတွက်စစ်မြေပြင်ပေါ်သို့ခုနစျပါးသူရဲကောင်းများ (စမှာသုံး, လေးသော့ဖွင့်) အားဖွင့်အားမရပါဝငျသညျ။ တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ်ရှိနိုင်ပါနည်းလမ်းများကွဲပြားခြားနားသောကျွမ်းကျင်မှု, အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုနှင့်သူရဲကောင်းများ၏ကန့်သတ်အကွာအဝေးရှိပါတယ်
တစ်ဦးက RPG စွန့်စားမှု, သင့်သည့်အဆင့်အထိကြိုးစားပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
Luigi4vs Mario
ဒီအချိန်မာရီယိုနှင့် Luigi စစ်တိုက်ခြင်းငှါအရပျကိုပြောင်းပေးပါ။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ အဘယ်သူသည်ဆုရှင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
သငျသညျကဂြိုလ်သား Truck ကားဒရိုင်ဘာဖြစ်ကြာသောအရာကိုရှိပါကကြည့်ရှုပါ။ ဒီဂြိုလ်သားဂြိုဟ်ရေဒီယိုတက်ကြွကျောက်ခဲနှင့်ပြည့်စုံသည်နှင့်ဤအနည်းငယ်သာဂြိုလ်သားကသူတို့ရဲ့စက်ရုံမှာစွမ်းအင်ကိုလုပ်ဖို့လုံလောက်တဲ့ကျောက်ခဲတို့ကိုရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။
douchebag ယလေ့ကျင့်ခန်း 2
ထိုအစီအစဉ်မှ Subscribe, ကြွက်သားတွေရ, swag ရလူကြိုက်များရနှင့်မင်းသမီးနှင့်အတူရ! ကံကောင်းပါစေ Douche!
stickman vs ကိုချော့တခါ,
ဤရွေ့ကားဘဏ်မှဓားပြဒါကြောင့်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ချောဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျကိုသာရော်ဘာကျည်ဆံအသုံးပြုနေသည်နှင့်ဒါကြောင့်သူတို့™ t ကိုသေကြေကွဲဖြစ်€wonâ။ သူတို့လုံးဝကျည်ဆံ-သက်သေပြရာရာ၌ဝတ်ဆင်ကြသည်ကတည်းကသို့သော်မိမိတို့ခေါင်းပေါ်များအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ Youâ€ပထမဦးဆုံးဌပြီးအောင်မှသာ 1 မိနစ်မ™